Youth owesilisa zezinwele ziyahlukahluka unyaka nonyaka. Ngezinye yimfashini zonke haircuts isikhathi ezahlukene. Amanye amadoda acabange ukuthi abesifazane kudingeka kuphela ukuvakashela wezinwele futhi baqiniseke ukuthi banayo engqondweni. Kuyinto owandile onganembile. Noma yimuphi ummeleli wobulili namandla kudingeka amakhambo waqobe ukuya stylist professional. Phela, ukwakha isithombe ngaphandle enhle, kwekhanda uzilungise engenakwenzeka. Akusizi ifomu okukhulu ngokomzimba, akukho yini izingubo ezisesitayeleni. Konke kufanele kube ngokulinganisela, yonke into kufanele ibe Lihle futhi emuhle, futhi izinwele kanye. Kungemva kwalokho sithemba isikhundla esisha, ukwakha ubuhlobo obuhle nabanye futhi uyohlale ukunakwa abesifazane.
Youth zezinwele 2011- , ngaphezu kwakho konke, ukubukeka nesibindi. Metrosexuality has-beens. Kodwa-ke, lokhu akusho ukuthi bonke abantu ngothi lwabo kufanele kuncishiswe ubude izinwele ekhanda esiphansi. Omunye Kufanele sikhumbule njalo ukuthi zezinwele intsha amadoda kufanele ngempela ofanele ngawe, ezihlanganiswe indlela yakho yokuphila, indlela esiqonda zezwe futhi isithombe iyonke. Ngisho noma haircut ubhekwa nemfashini manje, kungase nje ngeke uhambe. Yingakho ngosizo stylist professional kanye wezinwele njengoba kudingeka.
Yiqiniso, manje esiqongweni ukuthandwa guys uyindoda endaweni ethile, ngisho ngesihluku, nezinwele njengoba short futhi izidindi zibe ukukhanya akukho. Kuyinto lezi guys zibhekwa Dandy yesimanje. Uma ufuna ukwengeza isithombe sakho abanye ezemidlalo, ungakwazi ukhule ube sideburns amancane, kodwa Ungeqisi it. Futhi ngosizo Intshebe bangadlala ukuma ubuso: ubude ewumngcingo yayo futhi iDemo awathenile.
Zezinwele intsha amadoda bayindlala kakhulu, uma zenziwa ezisontene. Undulation kunikeza isithombe obugagu kanye kuhlangene isitayela abayitoho ubukeka zikhange kakhulu. Ngosizo ezisontekile kalula ukwazi ukufihla ezindaweni ezifana bakuphi hhayi eningi kakhulu. Ngakho ukuthi abanikazi ezisontekile, singasho lucky.
Uma une izinwele iqonde, kodwa ufuna zezinwele intsha amadoda esuka ezisontekile ukuze uzame ngokwakho, ungalilahli ithemba. Kuyinto kudingekile kuphela ukuze ikhule izinwele ubude ethile, futhi ukwenza ukupakisha ku izinwele owomile. Ukuze wenze lokhu, thatha gel futhi silisebenzise kusukela ezimpandeni kuya amathiphu izinwele manje walala ikamu abo neminwe. Wax kungcono hhayi ukuyisebenzisa ngokweqile nesisindo phansi izinwele.
Cool zezinwele for abafana kule sizini - super haircuts iDemo, zezinwele Emo isitayela nezinwele ezinde ukuthi ulondekile embondelene. Super iDemo kusho ukuthi izinwele ubude ngaphansi kuka-1 isentimitha. Lokhu ukugunda izinwele ngokuvamile ekhethwe intsha abafuna stylish, kodwa baze bangabi nasikhathi sokuba laying force phezu-umsebenzi emsebenzini. Emo kwekhanda - kuyinto etshekile umphetho ku izinwele ezimnyama nge zingu imibala ehlukene. Kulo nyaka, lo black ethandwa nonsundu.
Zezinwele intsha leduna style Retro futhi baye banda funa. Guys Ukhetha zezinwele short nge ukufakwa bushelelezi. Manje fashion ezinhle abafana, ngakho uma nqumela gel kakhulu noma ukuvenisha, uyobheka stylish. Kodwa ungakhohlwa labo ukuthi amantombazane usathanda abafana ezimbi, ngakho-edlubulundayo rocker kwekhanda esihle. Kwenze elula: ubude lonke izinwele mousse noma gel sisetshenziswa bese kunezinxushunxushu kwekhanda ruffles izandla.
Zezinwele intsha owesilisa, ozokwelusa manje udumile, liphinde kwekhanda lapho uboya ngemuva ekhanda lungaphezu phambi. Asymmetry ngaso sonke isikhathi akaphelelwa kwayo, kuhlanganise e haircuts zabesilisa. Okubaluleke kakhulu ukhethe kwekhanda ukuthi kwakunguwe, wayengekho Craze abayizimpumputhe. Kwenta kanjalo kutawukusita ukwenza kuphela wezinwele abanolwazi.
Indlela yokulondoloza ubuhle bezinwele?